August 13, 2017 - Page2of 10 - TV Annapurna
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाढी, पहिरो र डुबानको प्रकोपमा परेकालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब रु. १ करोड ९७ लाख प्रभावित जिल्लामा आज निकासा गरेको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत सो रकम पीडितको अवस्था हेरी वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहने सो समितिले सम्बन्धित जिल्लामा भएको घटनाको विवरण संकलन गर्ने तथा क्षतिको तथ्याङ्क लिई सो रकमबाट राहत वितरण गर्ने छन् । मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख शिवनाथ पौडेलले प्रारम्भिक चरणका लागि पठाइएको सो रकम पीडित समूहमा भएको क्षति तथा प्रभावितको घरबारविहीन अवस्थालाई मूल्याँकन गरी…
हेटौँडा । शनिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले पहिरो जाँदा हेटौँडा–नारायणघाट सडकखण्डको ज्यामिरे र सान्नानीटारको पहिरो हटाई यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन राजपथको बाघझोरा र भैँसेमा रहेको पहिरो हटाई हेटौँडा–फाखेल सडकखण्डको यातयात सेवा पनि आजै साँझबाट सञ्चालन भएको छ । यसैगरी, हेटौँडा र वीरगञ्ज सडकखण्डको अमृतगञ्ज नजिक राजमार्गमा गएको पहिरो हटाई यातायात सेवा पनि सञ्चालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन राजपथको सिमभञ्ज्याङनजिक ठूलो पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको आज पनि ठूलो ढुंगा फुटाउने काम भइरहेकाले भोलि दिउँसोसम्ममा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मकवापनुरका प्रजिअ…
सिन्धुली । सिन्धुलीमा आइतबार साँझ हायस गाडीको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–३ गुठबजारमा हायसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बाबु घाइते र छोराको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा धनुषा मिथिला नगरपालिका–९ निवासी ९ वर्षीय शिव कोइरालाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा३ख ८९३९ नम्बरको हायसले सिन्धुलीतर्फ आउँदै गरेको ज१०प १९२७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाषचन्द्र बोहोराले जानकारी दिए । मिथिला नगरपालिका–९ निवासी ४० वर्षीय निरोज कोइरालाको घाइते भएका बाबुको खुर्कोटस्थित भरोसा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बालकलाई अस्पताल…
दस्तखत सनाखतका लागि १० दिन समय थप गर्न माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)ले निर्वाचन आयोगमा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको दस्ताखत सनाखतका लागि १० दिनको समय थप गर्न माग गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशंशेर राणाले उक्त व्यवस्थाका लागि माग गर्दै निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । राणा समूहले गत साउन २२ गते पार्टी विभाजनका लागि सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आयोगमा हस्ताक्षर बुझाएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विभाजनको घोषणा गरेको उक्त पार्टीले ४० प्रतिशत सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्टी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही नियमअनुसार आयोगले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का नेतालाई…
राहत र उद्दारका लागि एमालेले जनवर्गीय संगठन खटायाे
August 13, 2017 August 13, 2017 Annapurna TV
काठमाडौं । बाढी प्रभावितहरुको उद्धारका लागी नेकपा एमालेले प्रभावित जिल्लाहरुमा जनर्वीय संगठन खटाएको छ । बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत तथा उद्दारका लागि जनवर्गीय संगठनहरुलाई खटाउनुको साथै सरकारसँग पीडितहरुको उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाउन माग गरेको छ । एमालेका अनुसार सप्तरीमा युवा संघ र भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन, सिराहामा अनेरास्ववियु, धनुषामा अखिल नेपाल महिला संघ, महोत्तरीमा लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन र आदिवासी महासंघ, सर्लाहीमा अखिल नेपाल किसान संघ, रौतहटमा बुद्धिजिवी परिषद् र मानवअधिकार एलाइन्स र बारामा खेलकुद महासंघलाई खटाइएको छ । उता पर्सामा जिफन्ट, झापामा जनसाँस्कृतिक महासंघ र मुक्ति समाज,…
धनुषामा एक बालिका बाढीले बगाउँदा बेपत्ता
महेन्द्रनगर । धनुषामा बाढीले एक बालिकालाई बगाएर बेपत्ता बनाएको छ । बेपत्ता हुनेमा धनुषाको नगराइन नगरपालिक–४ घोडघास बस्ने घुरघुर राउतकी १० वर्षीया छोरी दुर्गा राउत छिन् । आज दिउँसो घाँस काट्न गएको बेला उनलाई खेतमा आएको बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको स्थानीयवासी प्रमोद राउतले जानकारी दिनुभयो । बालिका दुर्गासँगै बगेका अन्य दुईजना बालिकाको भने स्थानीय बासिन्दाले सकुशल उद्धार गर्न सफल भएका छन् । बेपत्ता भएकी दुर्गाको खोजी कार्य जारी रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । धनुषामा खोला बगाएर एक युवकको मृत्यु, एक हजारभन्दा बढी घर डुबानमा धनुषामा खोलाले बगाएर एक युवकको मृत्यु…
बाढीका कारण दुई दिनदेखि कैदी बन्दी भोकै
बर्दिवास । महोत्तरी कारागारका कैदी बन्दी दुई दिनदेखि भोकभोकै परेका छन् । कारागार परिसरको कार्यालय र कैदी थुनुवा कक्षमा पाँच फिटभन्दा बढी पानी जमेपछि शनिबारदेखि नै कैदी बन्दीले खाना नपाएका हुन् । रातु र बिगही नदीमा आएको बाढी बाँध भत्काउँदै जलेश्वर नगर पसेसँगै गहिरो ठाउँमा रहेको कारागार परिसरमा पाँच फिट पानी पसेको हो । बाढी कैदी थुनुवा कक्षमा पस्नासाथै आपूmहरुलाई माथिल्लो तलामा सारिए पनि खाना पकाउने ठाउँ र सामग्रीको अभाव भएकाले दुई दिनदेखि भोकभोकै बस्नु परेको कारागारका चौकीदारसमेत रहेका कैदी श्रीनारायण महतोले बताउनुभयो । जम्मा १३५ कैदी राख्ने क्षमताको सो…
आफ्नो भूमी बचाउन भारतले सबै ३६ ढोका खोल्यो
काठमाडाैँ । आफ्नो भूमी बचाउन भारतले गण्डक बाँधका सबै ढोका खोलेको छ । नारायणीमा पानीको सतह खतराको तहभन्दा माथी पुगेपछि ३६ वटै ढोका खोलिएको हो । आफ्नो नहरमा पूर्ण क्षमतामा पानी लैजाँदा नहर भत्किने त्रासमा रहेको भारतले नहरमा पानी बन्द गरेको हो । नवलपरासीको त्रिवेणीमा बाँध बनाएर भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा पानी लगेको भारतले ती ढोका बन्द गरेर आफ्ना तर्फ (गण्डकको पूर्वी र पश्चिमी नहर) पानी लैजाँदा जिर्ण नहर फुट्न सक्ने भएकाले आफ्नो नहर जोगाउन सबै ढोका खोलेको हो । सबै ढोका खोलिएपछि नारायणी नदीमा पानी बग्छ र उसको नहरमा…
राजपालाई छाता चिन्ह दिन सकिदैन: आयोग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई नयाँ चुनाव चिन्ह दिन नसकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेतृत्वसँगको सामूहिक छलफलमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन चिन्ह कुनै पनि राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने प्रष्ट पार्नुभयो । आईतबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले छाता चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पुरानै चुनाव चिन्ह मात्रै दिन सकिने बताएको हो ।
काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधारको विकास हुनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का खेलाडीले आज मन्त्रालयमा गरेको भेटमा मन्त्री केसीले पूर्वाधारबिना खेल क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो । “मुलुकको खेलको विकासका लागि नै मन्त्रालयको स्थापना भएको हो, खेल र खेलाडीको विकासमा म प्रतिबद्ध छु,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री केसीले सबैका लागि खेल, स्वास्थ्यका लागि खेल र राष्ट्रका लागि खेल भएकाले राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा, सरसफाइ, विकास निर्माण र राष्ट्रनिर्माणमा खेलाडीको प्रयोग गरे…